रामेछापका जनता काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा भोकभोकै छन - नेतालाई खुल्ला पत्र
रामेछापका जनता काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा भोकभोकै छन – नेतालाई खुल्ला पत्र
Kumar Shrestha calendar_today २३ चैत्र २०७६, 11:05 am
आदरणीय जनप्रतिनिधि ज्यु,
लगाएत सम्पुर्ण राजनीति नेताहरुमा
हार्दिक हार्दिक नमन।
खासै लेख्नु पर्ने कुरा त केहि थिएन तर पनि आज रामेछाप जिल्लामा भएका केहि चित्त नबुझ्ने कुरा खुल्ला पत्र मार्फत प्रस्ट्याउँदै छु।
हुनत रामेछाप जिल्लामा उच्चस्तरीय नेता नजन्मिएका हैनन्, आज जनता बिपतीमा पर्दा कता हुनुहुन्छ देखिदैन । उहाँहरु आफ्नो र नागरिकको सुरक्षा अपनाउदै हुनुहुन्छ होला? तर उहाँहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा यो हो कि हो यति बेला आफ्ना जनता कहाँ छन् ? के गर्दैछन ? समस्या के हो ? उहाँहरू किन बुझ्न खोज्नु हुन्न ? कि जरुरत नभएको हो?
माननिय कैलाश ढुङ्गेलज्यु के गर्दै हुनुहुन्छ ।
चुनाबको बेलामा रामेछापका जनता को कहाँ छन भनेर खोज्नेले यो संकटमा खोज्न जरुरी छैन? रामेछापबाट प्रदेश सभाको निर्वाचन जितेर हाल बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्नु भएको माननिय कैलाश ढुङ्गेलज्यु के गर्दै हुनुहुन्छ? बिश्चमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट देशलाई नै जोगाउन देश नै लकडाउन गरिएक छ । यो लकडाउनका कारण रामेछापका जनता काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा भोकभोकै छन ।
सांसद बन्नु भएक श्यामकुमार श्रेष्ठ “कुशल” कता हुनुहुन्छ यो बिपतिमा ? कहिले काही न्युज सेयर गरेको मात्र देखिन्छ
अझ प्रस्ट रुपमा भन्नु पर्दा रामेछापबाट प्रतिनिधि सभाको चुवाब जित्दै प्रतिनिधि सभा सांसद बन्नु भएक श्यामकुमार श्रेष्ठ “कुशल” कता हुनुहुन्छ यो बिपतिमा ? कहिले काही न्युज सेयर गरेको मात्र देखिन्छ । अनलाईनमा आएको न्युज सेयर गरेर मात्र यो बिपती पार लाग्छ ? हुनत तपाईले एक महिनाको तलब सेवा सुविधा कोरोना कोषमा दिने उद्घोष गरि सक्नु भयो । सुनेर खुसी लाग्यो । तर नागरिकले तपाईको एक महिनाको सुविधा खोजेको होईन । रामेछापका नागरिकले यो बेला तपाईको प्रत्यक्ष साथ खोजेका छन् । तपाईले दिनु भएको एक आस्वासना रामेछापका नागरिकलाई कोरोना संक्रमण सँग लड्ने तागत हुन सक्छ ।
खबरदार नेताज्यू कुनै ब्यक्ती भोकमारिले मर्लान् ? उनिहरुलाइ सुरक्षा सहित आफ्नो घरमा ल्याउनुस् ताकी उनिहरु आफ्नो घरमा वार्डको जिम्मामा क्वरेटाइन मा बस्नु पाउन्। कति जना आउन बाकी छन प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष सहितको युवा परिचालन गरेर आउन बाकी जनता सुरक्षित घर ल्याउन जरुरत छ।
रामेछाप क्षेत्र “क” बाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नु भएको माननिय शान्ती प्रसाद पौडेल कहाँ हुनुहुन्छ?
राष्ट्रिय युवापरिषद पुर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष ज्यु पनि रामेछाप कै माटोमा हुर्कनु भएको हो । के उहाँको रामेछाप जिल्ला प्रति कुनै दायित्व रहन्न? नेता माधब ढुङ्गेलज्यू तपाइँको युवा परिचालन निति कता लानु भयो खै ? यो संकटमा युवा परिचालन गरि तपाइले तपाइको जिल्लालाई त मजबुत राख्न सक्नु हुन्न भने अरु बाकी के गर्न सक्नु हुन्छ? तपाइ युवा परिचालन निति ल्याउनुस तपाईलाई सम्पुर्ण युवाले साथ दिने छन।
त्यस्तै प्रतिपक्षी पाटी कता छन ? पुर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेज्यू , के तपाईले यो समय रामेछाप को गतिविधि निगरानी गर्नु पर्ने होइन? हामी राम्रो लाई राम्रो भन्छौं, र नराम्रोलाई नराम्रो । प्रतिनिधि सभाको चुनाब हारे पनि पुर्णबहादुर तमाङ (कान्छाराम) ले उपचारका लागी अस्पताल सम्म लैजाने खर्च बेहोर्ने सामाजिक संजाल मा आइरहेको छ ।
सत्य हो भने महान् काम हो । पाटी जुनसुकै होस चुनाबको बेला पाटी हेर्ने तर मानवीय काम गर्न सबैको मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ ।
सत्य हो भने महान् काम हो । पाटी जुनसुकै होस चुनाबको बेला पाटी हेर्ने तर मानवीय काम गर्न सबैको मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ । यो बेला भनेको जात धर्मपार्टी भन्दा माथी उठेर कोरोना संक्रमणबाट जोगिनु र जोगाउनु हामी सबैको मानविय धर्म हो ।
कति जना आउन बाकी छन प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष सहितको युवा परिचालन गरेर आउन बाकी जनता सुरक्षित घर ल्याउन जरुरत छ।
अन्तमा : मेरो खुल्ला पत्रका कारण चोट पुग्न गएमा माफी माग्द छु, जनप्रतिनिधि र नेता भए पछि आलोचना सहन सक्नु पर्छ।
हामी जुनसुकै पाटिका भए पनि अहिले रामेछाप वासी भएर संकट सामना गर्नु उचित हुन्छ।